Koowheel mooto korontada kor loogu qaado wacyiga deegaanka-ilaalinta - Jomo Technology Co., Ltd
Koowheel mooto korontada kor loogu qaado wacyiga deegaanka-ilaalinta
Waxaa jira dad badan oo caan ah brand mooto hoverboard , sidee baa Koowheel waxaa lagu qiimeeyay sida top toban brand mooto smart dhowr sano? Fadlan furo browser Google, ka dibna ka raadin keywords "ayuu qeybiyaha mooto dheelitirka ", ayaa lagu ogaaday in magaca domain www.koowheel.com bogga koowaad ee.
In Century kow iyo labaatanaad, waxa la odhan karaa in si joogto ah oo keliya isbeddel, in this Zaman si degdeg ah la beddelo, badbaadada ee sheekada fittest waxaa martigeliso maalin kasta. In dunida ganacsiga, ka danbeeya ma aha oo kaliya ka dhigan tahay garaacay, waxay ka dhigan tahay dhimasho, kaliya hal-abuurnimo oo joogto ah si ay ganacsi u awood badan, iyo koboca hadhid badan. warshadaha Shiinaha ee gaariga korontada ayaa soo maray in ka badan labaatan sano ah ee horumarinta, tartanka ayaa galay marxalad cad u kulul.
Koowheel sida ugu horeysay xirfadeed brand mooto smart , ayaa had iyo jeer lagu yaqaan for abuurnimo kulul, qofka mas'uul ka sheegay in shirkadu ma aha cusub, waxaa jira horumarka lahayn. Iyo hal-abuurka aan joogi kartaa oo kaliya on heerka farsamada, laakiin sidoo kale waa in la muuqataa in model ganacsiga, laakiin sidoo kale in ay diiradda saaraan macaamilka aragnimo macaamiisha.
Sida qof walba ogyahay, film Kodak, Nokia telefoonka gacanta, waxay ahaayeen boqortooyadii ganacsi, laakiin hadda hoos u kicitaan ah, hal dhibic ka fool delisting. Sababta ay failure waa mid aad u fudud, ma jirto koboca abuurnimo ee tarabuunka ganacsi. Zaman Digital yimid, screen taabashada smart telefoonka gacanta ayaa gaaray, ay weli ku raaxeeysanayaan sharaf ee la soo dhaafay, ma la qabsan karaan si ay marxalad cusub, si ay u siiyaan waayo-aragnimo ah oo macaamiisha ka wanaagsan.
Wajahay baahida marxalad cusub, dheelitirka korontada mooto shirkadaha ma aha oo kaliya si ay u abuuraan ah saamayn daaweynta biyaha ku ool ah, laakiin sidoo kale fiiro gaar ah u waxyaalaha aasaaska ah ee fashion, ay weheliso deegaanka nool aadanaha, si ay u abuuraan nolol wanaagsan. Waqtigan xaadirka ah, ee Koowheel dheelitirka korontada mooto leading brands are aware of this, obviously in the direction of continuous efforts.
Intaa waxaa dheer, shirkadaha intooda badan waa ay ka warqabaan macaamilka ayaa ka war wax soo saarka ee hadda jira aan la kulmi karo baahida hal-abuurnimo. Abuurnimo Tani waa muhiim, laakiin hoose marinka, kale waa mid yara xoog, wuxuu keeni karaa faa'iidooyinka iyo xajinta kooban. Sidaa darteed, ka mooto wheel dheelitirka shirkadaha waa in on-abuurnimo qaado sida ay baahida ka imaan karta macaamiisha, waxyaabaha cusub sida ka mid ah la bedeli karin, mid aad u fudud si ay u noqdaan farxo cusub ee suuqa.
Xilligii ay go'aamiso baahida macaamilka, baahida macaamiisha go'aamiso mustaqbalka ee alaabta. In xilligii of fikradda ah mooto dheelitirka korontada, Koowheel dheelitirka korontada mooto in "carbon yar yahay ilaalinta deegaanka, safarka cagaaran" sifooyinka mashquulin faa'iido waadaxa ah ee alaabta, iman kara ee aan xad lahayn.